Guddoomiye WAYAB, Tifaftire KEEFKEEF iyo Maareeye CALOOLEY oo Si Adag Naqdiyey Go’aankii Lagu Xayiray | Salaan Media
“Annagu Waxaannu U Aragnaa Inay Xayiraaddani Daba-Socoto, Weerarkii Hore Ee Ay Dawladdu Ku Soo Qaadday Wargeyska Hubaal”
Guddoomiyaha Wargeyska Hubaal Cabdillaahi Aadan Wayab
Hargeysa (SM):- Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex, ayaa Shalay Xayiraad ku soo rogtay Wargayska Hubaal oo ka mid ah Wargeysyada madaxa-bannaan ee ka soo baxa CaasimaddaSomalilandee Hargeysa, kaasoo aan la caddayn sababta xayiraadda Wargeyska keentay iyo sharciga loo cuskaday toona.
Amarka Xayiraadda Maxkamadda Gobolka Maroodi-Jeex soo saartay oo uu ku saxeexan yahay Guddoomiyaha Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex Faysal Cabdillaahi Ismaaciil, ayaa ujeeddada Xayiraadda Wargayska Hubaal lagu sheegay dalab uu Xafiiska Xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranku u gudbiyay Maxkamadda.
Qoraalka Maxkamaddu soo saartay, ayaa lagu amray in Wargayska Hubaal aanu dalka ka soo bixi Karin, laguna Daabici karin dhammaan Madbacadaha dalka ku yaal, illaa Amar danbe ka soo baxayo Maxkamadda Gobolka Maroodi-Jeex. Waxay Maxkamaddu uga digtay ciddii lagu qabto iyadoo daabacaysa Wargayskaas in la hor-geyn doono Sharciga.
Hase-yeeshee, Guddoomiyaha Wargeyska Hubaal Cabdillaahi Aadan Cumar (Wayab) oo BBC-da u warramay Xalay, ayaa sheegay inaanay garan Karin sababta ay Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex xayiraadda ugu soo rogtay Wargeyska madaxa-bannaan ee Hubaal, isla markaana aanay jirin Maxkamad looga yeedhay iyo dacwad ay og-yihiin oo lagu soo oogay toona. Hase-ahaatee, ay ku war-heleen qoraalka Maxkamadda gobolka Hargeysa (Maroodi-jeex) ku xayirayso Wargeyska Hubaal oo laga baahiyey Idaacadda Afka dawladda ku hadasha ee Radio Hargeysa.
“Ma ogin sababta ay Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex u xayirtay Wargeyska Hubaal, Maxkamad nalooga yeedhay iyo wax nala soo weydiiyey toona ma jirin, ee waxaannu ku war-helnay Warka Xayiraadda Maxkamadda oo laga akhriyayo Idaacadda Radio Hargeysa.” Sidaa ayuu yidhi Cabdillaahi Aadan Wayab oo ah Guddoomiyaha Wargeyska Hubaal.
“Annagu waxaannu u aragnaa inay Xayiraaddani daba-socoto, weerarkii hore ee ay dawladdu ku soo qaadday Wargeyska Hubaal.” ayuu yidhi Wayab, waxaanu sheegay inaan weli wax natiijo ah laga soo saarin baadhitaan uu Taliyaha Boolisku sheegay inay ku samaynayaan ninkii mid ka mid ah labada nin ee weeraray Wargeyska Hubaal, isla markaana dhaawaca gaadhsiiyey Maareeyaha Wargeyskaas Maxamed Axmed Jaamac (Caloolay), isagoo xusay inay tallaabadan xayiraaddana u arkaan inay weerarkaas daba-socoto.
Cabdillaahi Wayab, waxa uu sheegay inay arrinta xayiraadda Wargeyska u arkaan sharcigii Qaranka Somaliland oo lagu tuntay, maaddaama oo aanay Maxkamaddu u yeedhin, tallaabada ay qaaddayna waxba ka ogeysiin Masuuliyiinta Wargeyska. Sidaa daraadeed, waxa uu sheegay haddii sharciga la waafajin waayo cuna-qabataynta Hubaal inay iyaguna tallaabo taa beddelkeeda ah qaadi doonaan.
Guddoomiyaha Wargeyska Hubaal Cabdillaahi Aadan Wayab oo ka jawaabayey su’aal laga weydiiyey sababta loo xayiray Wargeyska waxa ay la xidhiidhin karaan, waxa uu yidhi; “Wallaahay kol haddaanay iyagu soo sheegin, ma garanayno sababta, laakiin waxaannu u malaynaynaa inaannu labadii maalmood u dambeeyey nidhi Somaliland ha caddayso mawqifkeeda ku saabsan arrinta ay isku hayaan Masar iyo Itoobiya iyo Wefti yimi halkan (Hargeysa) oo Yemen ahaa oo aannu nidhi waxa laga yaabaa inuu yahay ninkani nin Ganacsade ah oo Masri ah…..”
Guji Si Aad U Daawato Mas’uuliyiintan oo Warbaahinta la Hadlay
“Annagu ma garanayno goorta ay Garsoorkii iyo Fulintii isku biireen, ee waxay ahayd in sharciga la dhawro. Saddex dhadhaar oo siman ayey ahaayeen Xeer-ilaalinta, Fulinta oo Xukuumadda ah iyo Sharci-dejinta, laakiin goortan ay isku biireen Xeer-ilaalinta iyo Fulintu (Xukuumaddu) ma garanayno.” ayuu yidhi Cabdillaahi Wayab.
Sidoo kale, Tifaftiraha Wargeyska Hubaal Xasan Xuseen Cabdillaahi (Keenkeef), ayaa sheegay inay caawa xarunta Wargeyska ee magaalada Hargeysa ay Ciidammo hubaysan oo Boolis ahi ilaalinayeen. “Annaga waxba nalooma sheegin, Maxkamad-na naloogama yeedhin, manaannaan ogeyn goor xukunku dhacay ee Maxkamadda iyo Xeer-ilaalinta ayuun baa Warqad isu xukumay. Xaruntii Wargeyskuna caawa way xidhan tahay, cidi nagama geli karto oo Ciidammo Boolis ah oo Hubaysan ayaa la dul dhigay,”
Wargeyska Hubaal ayay laba nin oo ku labbisan Dirayska Booliska Somaliland weerareen goor habeennimo ah 24-kii bishii April ee sannadkan 2013-ka, kuwaasoo midkood dhaawac u geystay Maareeyaha Wargeyskaas Maxamed Axmed Jaamac (Caloolay) oo gacan ka jabay, waxaanay hawl-wadeennada Hubaal ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan ninkaas oo loo gudbiyey Ciimmada ammaanka. Waxaanu waqtigaa Taliyaha Booliska Somaliland Cabdillaahi Fadal Iimaan sheegay in Ninkaas ku eedeysan inuu weeraray Wargeyska Hubaal ay gacanta ku hayaan, isla markaana ay Boolis ahaan si caddaalad ah u baadhayaan kiiskaas.